ဤတနင်္ဂနွေကိုကြည့်ရန် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးပြပွဲ ၅ ခုမှာစိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီနှင့်အခြားအရာများ - Netflix မူရင်း
ယခုအပတ်တွင်ကြည့်ရှုရန် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးပြပွဲ ၅ ခု - စိုစွတ်သောအမေရိကန်အမေရိကန်နွေရာသီနှင့်အခြားအရာများ
Ozark ရာသီ 1, အပိုင်း5ပြန်လည်စုစည်းခြင်း: အုပ်ချုပ်ရေးနေ့များ Breaking Bad မူးရူး - ကြည့်ရှုခြင်းလမ်းညွှန် - Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ် ၃၀
Once UponaTime နှင့်စိုထိုင်းသောအမေရိကန်နွေရာသီပြပွဲများအပါအ ၀ င် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေမှု ၅ ကြိမ် (ဇူလိုင်လ ၂၉ မှသြဂုတ်လ ၅ ရက်) ကိုကြည့်ပါ။
ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်မှသြဂုတ်လ ၅ ရက်အထိ Netflix တွင်ပြသမှုငါးခုပြုလုပ်ခဲ့သည် စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - ၁၀ နှစ်အကြာတွင် နှင့်ပိုပြီး!
ဇူလိုင်လအကုန်နှင့်သြဂုတ်လအစတွင်ပုံမှန်အားဖြင့် TV အတွက်အလွန်နှေးကွေးသောအချိန်ဖြစ်ပြီး Netflix အတွက်လည်းအလွန်မှန်ကန်သည်။ Netflix ရဲ့မူလစီးရီးကိုသင်မကြည့်သေးဘူးဆိုရင် Ozark Netflix တွင်သင်အမြန်ဆုံးကြည့်နိုင်သည့်ဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ရှုသင့်သည်။
ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်မှသြဂုတ်လ ၅ ရက်အထိ Netflix တွင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးပြပွဲ ၅ ခုမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - စခန်း၏ပထမနေ့
စခန်းပထမနေ့ Wet Hot American Summer ဇာတ်ကားအတွက် prequel စီးရီးဖြစ်သည်။ စီးရီးသည် ၂၀၁၅ ဇူလိုင်လတွင် Netflix တွင်ပြသခဲ့သည်။
၎င်းသည်မူလရုပ်ရှင်၏ Premiere မှ ၁၅ နှစ်နီးပါးကြာခဲ့ပြီးအဓိကဇာတ်ကားအားလုံးသည် Netflix စီးရီးတွင်ပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဇာတ်ကောင်အားလုံးသည်မူရင်းရုပ်ရှင်မတိုင်မီဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်း ပို၍ အသက်ကြီးလာသည်။
စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ, ရုပ်ရှင်သည် Netflix တွင်လည်းထုတ်လွှင့်သည်။ သင်ရုပ်ရှင်နှင့် prequel စီးရီးကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ...
ဘယ်အချိန်မှာ Legion ရာသီ2hulu အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - ၁၀ နှစ်အကြာတွင်
စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - ၁၀ နှစ်အကြာတွင် သြဂုတ်လ ၄ ရက်၊ သောကြာနေ့ Netflix တွင်ပြသမည် စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ, အကြံပေးများနှင့်မိတ်ဆွေများအုပ်စုသည်နွေရာသီစခန်းပြီးနောက်ဆယ်နှစ်အတိအကျတွေ့ဆုံရန်သဘောတူကြသည်။
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်နည်းနည်းပိုရှည်ဆယ်နှစ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်တစ်ပတ်ရဲ့အဆုံးမှာပြန်စခန်း Firewood သွားကြသည်! သရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးနီးပါးသည် F မှအသစ်ရောက်ရှိသူများနှင့်အတူပြန်လာကြသည် စခန်း၏ပထမနေ့။ ရာသီသစ်တွင်ဇာတ်ကောင်အသစ်များလည်းရှိလိမ့်မည်။
ဒီစီးရီးအသစ်အတွက်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ငါရုပ်ရှင်၏ကြီးမားသောပန်ကာမိပါတယ်နှင့် စခန်းပထမနေ့ ဒါက Camp Firewood ရဲ့အဆုံးမဟုတ်သေးဘူးလို့တကယ်ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်။ David Wain နဲ့ Michael Showalter တို့ကဒီဟာကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းရှာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သတင်းဆိုး! အဖွဲ့ချုပ် Netflix မှထွက်ခွာသည်။ Netflix ကသြဂုတ်လတွင်ထုတ်လွှင့်သည့်အစီအစဉ်မှထွက်ခွာသည့်ပြပွဲများနှင့်ရုပ်ရှင်များစာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြေငြာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သတင်းရရှိခဲ့သည်။
အနည်းဆုံးသင်၏ပထမဆုံးစိတ်ကူးယဉ်ဘောလုံးရေးဆွဲရေးမူကြမ်းများမှတဆင့် Netflix ပေါ်ရှိစီးရီးကိုကြည့်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ချုပ် Netflix ကနေ Netflix ကနေတစ်ချိန်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်စီးရီးစီးဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ထက်ပိုပြီးသြဂုတ်လ 30 ရက်တွင် Netflix မှဆွဲထုတ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
Netflix ဟာစီးရီးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ခုထွက်ပေါ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအမြဲရှိတယ်။ Netflix ကပြသခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ထွက်ခွာသွားသည်ဟုပြောသောအခါ၊
လိဂ်နှင့်မတူသည်မှာ ရှေးရှေးတုန်းက Netflix တွင်ကျန်ရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ထက် ပို၍ ကောင်းသောသတင်းရှိသည်။ ရှေးရှေးတုန်းက ရာသီ6သြဂုတ်လ 25, သောကြာနေ့ Netflix ကမှလာမယ့်နေသည်။
ပရိသတ်များသည်ကြည့်ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေကြသည် ရှေးရှေးတုန်းက ရာသီ 6, ထိုသို့စောင့်ဆိုင်းနီးပါးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ စီးရီး၏ပထမရာသီငါးခုမှာ Netflix တွင်ယခုပင်စီးဆင်းနေသောကြောင့်သြဂုတ်လအကုန်ပိုင်းတွင်သင်စီးရီးကိုဖမ်းမိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ရှေးရှေးတုန်းက ရာသီ ၇ သည်အောက်တိုဘာ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၇ တွင် ABC တွင်ပြသခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ရာသီသစ်မစတင်မီဆဌမရာသီကိုစောင့်ကြည့်ရန်အချိန်များစွာရလိမ့်မည်။
ငါတို့ကြိုက်ပေမယ့် အံ့’s ခြင်းရဲ့သံလက်သီး နှင့်အံ့’s ခြင်း Marvel ရဲ့အစီအစဉ်များ၏ခမ်းနားအစီအစဉ်တွင်အရေးကြီးသောထင်လူအများစုကြိုက်နှစ်သက်ကြဘူး သံလက်သီး နှင့် Netflix အပေါ်ပထမ ဦး ဆုံးရာသီပြီးဆုံးခဲ့ပါဘူး။ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်းပထမရာသီမှမရရှိသူများအားသင်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းမှတစ်ဆင့်အာဏာရယူနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည် အဆိုပါ Defenders ။
ငါဆိုလို, ကတော်တော်လေးသိသာပါတယ် သံလက်သီး သို့ဆက်သွယ်မှု ကာကွယ်သူများ, နှင့်နောက်တွဲယာဉ်အပေါ်အခြေခံပြီး, ကတူပုံရသည် သံလက်သီး ဇာတ်လမ်းကငါတို့ထင်ထားတာထက်ပိုအရေးကြီးတယ်။
Netflix ဟာအသစ်ထွက်လာပါပြီ သံလက်သီး ဒုတိယရာသီအတွက်။ အဆိုပါသတင်းစဉ်အတွင်းကြေညာခဲ့သည် အဆိုပါ Defenders San Diego မှရုပ်ပြ -con မှာ panel ကို။
သင့်မှာပြီးဆုံးရန်ရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်ခန့်ရှိသည် သံလက်သီး မတိုင်မီ အဆိုပါ Defenders သြဂုတ် ၁၈ ရက်မှာ
netflix ကသားဖွားဆရာမ ၄ ယောက်လွှတ်ပေးသည့်နေ့ကိုခေါ်ပါ
netflix အပေါ်သဘာဝလွန်ရာသီ 14 အခါ